इराक बिरुद्द को खेल मा नेपाल ६:२ ले पराजित | Naya News Nepal
Home खेलकुद इराक बिरुद्द को खेल मा नेपाल ६:२ ले पराजित
इराक बिरुद्द को खेल मा नेपाल ६:२ ले पराजित
१६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०८:५१
काठमान्डौ जेष्ठ १६
सनिबार राति इराक संग को मैत्रीपूर्ण खेल मा नेपाल नेपाल ६-२ ले पराजित भएको हो । खेल इराक को बसरास्थित फायना स्टेडियम मा भएको थियो । नेपाल र इराक बिच करिब २ दश पछी आमुन्नेसामुन्ने भएको हो । इराक संग हाल साम्म ४ ओटा खेल खेली सकेको नेपाल ले एक खेलमा पनि जित हात पार्न सकेको छैन ।
इराकले पहिलो हाफमा ४ गरेको थियो भने दोस्रो हालमा दुई गोल थपेको थियो । नेपालले पहिलो हाफमा दुई गोल गरेको थियो । कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी नेपालको प्रशिक्षक बनेपछि यो पहिलो खेल हो ।
खेलको सातौं मिनेटमै खासिनले फ्रिकिकमा गोल गर्दै इराकलाई अग्रता दिलाएका थिए । तर नवौं मिनेटमा नेपालले बराबरी गोल फर्कायो । नेपालका अन्जन विष्टको प्रहार बचाउने क्रममा इराकका अहमेद इब्राहिम खलाफले आत्मघाती गोल गरेका थिए । २९औं मिनेटमा मनिस डाँगीले गोल गर्दै नेपाललाई २-१ को अग्रता दिलाए । मनिसले यही खेलमार्फत राष्ट्रिय टिममा डेब्यु गरेका हुन् र उनले डेब्यु खेलमै गोल गरेका हुन् ।
३९औं मिनेटमा मोहम्मद अब्दुलजाहराले इराकका लागि बराबरी गोल फर्काए । लगत्तै अर्को मिनेटमा अयेन हुसेनले गोल गर्दै इराकलाई ३-१ को अग्रता दिलाए । पहिलो हाफको इन्जुरी टाइममा अयमन हुसेनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै इराकलाई ४-२ को अग्रता दिलाए ।
६७ औं मिनेटमा मोहम्मेद रिदा एल एलायमीले गोल गर्दै इराकलाई ५-२ को अग्रता दिलाए । ७५औं मिनेटमा सजाद जसमी अलसाराफीले गोल गर्दै इराकलाई ६-२ को अग्रता दिलाए । खेलमा नेपालका गोलकिपर कप्तान किरण चेम्जोङले केही राम्रा बचाउ समेत गरेका थिए । नेपाली टोली अब विश्वकप छनोटका बाँकी ३ खेल खेल्न कुवेत जानेछ ।
Previous articleपुरानै प्रकार को बजेट लाइ निरन्तरता, बजेटमा कुनै पनि क्रमभंगता देखिँदैन – डा. बाबुराम भट्टराई
Next articleडा. बाबुराम भट्टराई ले भाजपा लाइ लेखेको पत्र [ बिचार]
रात्रि समय मा निर्माणका गाडी चल्न पाउने- निषेधाज्ञा १० दिन थप